» घरमा कोही मानिस आँउदा घरको इज्जत जान्छ भनेर मलाई हतार हतार लुकाइन्थ्यो ! – रमेश प्रसाई (हेर्नुहोस यो भावुक भिडियो ) घरमा कोही मानिस आँउदा घरको इज्जत जान्छ भनेर मलाई हतार हतार लुकाइन्थ्यो ! – रमेश प्रसाई (हेर्नुहोस यो भावुक भिडियो ) – हाम्रो खबर
रमेशले झापाको गह्रामुनीमा ५ कक्षा सम्म पढे । त्यसपछि उनी दृष्टि:विहिन विद्यार्थीह’रुले अध्य’यन गर्ने पुर्वाञ्चल ज्ञान चक्षु विद्यालयमा पढ्न थाले । दृष्टिविहिन मात्र अध्ययन गर्ने विद्यालय भए:काले उनलाई त्यहाँ पढ्न पनि सजिलो भयो । उनी सानै देखि नै गीत संगीतमा पनि रुची राख्थे ।दृष्टिविहि’नहरुका लागि उपयुक्त हुने वि’भिन्न कृयाक’लाप गराउने भएकाले अन्य कृयाकलापमा पनि उनी सकृय थिए । उनले २०६९ सालमा एसए’लसी दिएर प्रथम श्रेणिमा पास गरे ।
दृष्टिविही:न भएकै कारणले गर्दा उनी बेला बेला अपहेल’ना पनि सहनु परेको पनि बताउँछन् । कतिपय अव:स्थामा घर परिवारबा:टै समेत अपहेलित भएको कुरा बताउँछ । रमेश भन्छन “मलाई घरमा कुनै नयाँ मानिस आए भने लुक्न लगाइ:न्थ्यो । तलाइ अरु कसैले देखे भने घरको इज्जत जान्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिइन्थ्यो ।”अब प्रस्तुत छ १६ वर्षअघिको रमेश प्रसा’ईको एउटा डकुमे’न्ट्री भि”डियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चितवनमा आयोजित जनसभामा स्थानीय सांसद तथा भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरको अनुपस्थितिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
शनिबार आयोजित सभामा जिल्लाभरबाट नागरिकहरूको सहभागिता रहे पनि चितवनकै तीन जना निर्वाचित सांसद र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको अनुपस्थितिमाथि टिप्पणी गरेका थिए।
‘तपाईंहरूले तीन जना सांसद छान्नुभएको थियो। आज तपाईहरूको साथमा उहाँहरू खोई? तिनिहरूलाई तपाइँहरू चाहिएन, अब तपाइँहरूलाई तिनीहरू चाहिन्छ?,’ प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरेका थिए, ‘जसलाई तपाईहरू चाहिएको छैन, तपाईहरूलाई पनि उनीहरू चाहिन्न, आवश्यकता छैन। त्यही भएर उहाँहरू छटपटाएर हिड्नु भएको छ।’
उनले तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लौरो टेकेर लुखुर लुखुर देशभरि हिँडेको भन्दै टिप्पणी गरे।
तीनवटा प्रधानमन्त्री लौरो टेकेर लुखुरलुखुर देशमा लाइन लागेर हिडनुभएको छ, बुढेसकालमा’, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उहाँहरूको उद्देश्य राम्रो भएको भए स्वागत गर्न मिल्थ्यो, तर राम्रो छैन। देश सखाप पार्ने मनसाय उहाँहरूको छ।’
उनले भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर दाहालमाथि कटाक्ष गर्दै उनी पिकनिक खान गएको हुनसक्ने तर्क गरेका थिए।
‘यस महानगरपालिकामा अलिअलि मतपत्र च्यातेर जिते पनि यहाँका जनताले भोट त दिएकै थियो नि ! खोइ तपाइँहरुको मेयर यहाँ त छैन ?’, ओलीले भने, ‘तपाइँहरु यहाँ हुनुहुन्छ तर मेयर यहाँ छैनन्। सायद मेयर पिकनिक खान जानु भयो होला कतै?’
उनले संघीय सरकारले दिएको बजेटमा बन्दै गरेका सिटी हल र सडक शिलान्यासको प्रसंग पनि जोडे। ‘संघीय सरकारले एक अर्ब २० करोड हामीले दिने भवन हामीले बनाउने, अनि कुन केटाकेटीले शिलान्यास गर्ने त ?’, उनले भने।
जनसभाअघि ओलीले भरतपुरमा निर्माण हुन लागेको सिटी हलको शिलान्यास गरेका थिए। उनले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको पुल्चोक-गोन्द्राङ ६ लेन सडक विस्तारको शुभारम्भ पनि गरेका थिए।
उक्त शिलान्यास कार्यक्रमप्रति भरतपुर महानगरपालिका र नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले आपत्ति क्सजनाउँदै सहभागिता जनाएको थिएन ।